Yimaphi amabhayisikili amadala abiza imali? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Amabhayisikili akudala - unquma kanjani
Amabhayisikili akudala - unquma kanjani
Yimaphi amabhayisikili amadala abiza imali?
Amabhayisikili wevintage abaluleke kakhulu
Intengo yokuthengisa yeCopake Auction
C. 1892 yocingo $ 26,450
c. Ngo-1890 “URochester” $ 23,000
Ngo-1937 u-Elgin Bluebird $ 17,250
C. 1960 iBowden “Spacelander” $ 13,800
Lapho uthenga ibhayisikili, ukuthenga ibhayisikili elisetshenzisiwe kuyindlela enhle yokonga imali nokungeza kubhajethi yakho. Ngakho-ke, kule ndatshana, sizokunikeza umhlahlandlela wokuthi yini okufanele uyibheke ukuze ungatholi i-clunk futhi uqiniseke ukuthi uthola isivumelwano esihle, futhi uma unabangani abasanda kuqala futhi ufuna ukuthenga ibhayisikili, bese ucabanga ukwabelana ngale ndatshana ngezihloko. Sethemba ukuthi imininingwane ekulo ilusizo impela.
Into yokuqala okufanele uyenze ukubiza uSherlock Holmes wakho wangaphakathi bese usesha imikhondo efana nomseshi lapho uthenga ibhayisikili. Buza imibuzo, ubuze ukuthi kungani umnikazi wamanje ayithengisa, ungumgibeli wamabhayisikili? Mbuze ukuthi uligibele kuphi ibhayisikili, kungaba wusizo impela ekwakheni ubudlelwano nomthengisi futhi. Uma kusobala ukuthi awuyena umgibeli wamabhayisikili onentshisekelo kodwa uthengisa ibhayisikili lomgwaqo elibizayo, lokhu kufanele kuphakamise imibuzo eminingi.
Khumbula nje, uma isivumelwano sibonakala sisihle kakhulu ukuthi singaba yiqiniso, kungenzeka ukuthi kunjalo. (Amasongo wezwi lesaziso) Hawu! Awusoze wakukholwa lokhu, kuvela ukuthi ngazuza njengefa iPinarello Dogma F12 entsha enkosana yaseNigeria! Sincoma ngokuqinile ukuthi ungalokothi uthenge ibhayisikili ungakaqali ukulibona mathupha. Kwesinye isikhathi abantu bathenga ibhayisikili ngenhloso yokuqala ukuhamba ngebhayisikili, futhi nganoma yisiphi isizathu, abalithengi.
Ngenxa yalokhu, ibhayisikili alikalayishwa kakhulu futhi ekugcineni banquma ukulithengisa. Indlela enhle yokutshela manje ukubhuleka - uma amaphedi noma amarimu engagqokiwe kakhulu, futhi kungekho ukungcola okuningi emigodini nakuma-nooks kanye nama-crannies ku-caliper, kungenzeka ukuthi akusetshenziswanga kakhulu. Futhi omunye umkhondo omuhle yi-tape barbar.
Uma ingenasici futhi ingeyokuqala, kungenzeka ukuthi ibhayisikili alikaze libone isenzo esiningi. Okwamanje ngisho ukuthi kule ndatshana asikutsheli ukuthi unganquma kanjani usayizi wozimele olungile owudingayo ngoba ungenza leyo ndatshana ibe nde kakhulu. Kepha ungesabi, sinendatshana ekululeka ukuthi ungakwenza kanjani lokho, esikuxhumanisa ekugcineni kwalesi sihloko.
Ukulungisa okuthunyelwe kwesihlalo ukuze kulingane usayizi wakho kuwumqondo omuhle, kepha lokhu futhi kukuvumela ukuthi uhlole ngasese ezinye izinto ezimbalwa ngamasondo e-alloy, ukuthi izikhala zezihlalo zingabhajwa. Manje uzothola ukuthi ziyabambeka yini uma ungakwazi ukuzisetha. Zingaqhamuka, kepha kwesinye isikhathi lokhu kungaba yinto ebuhlungu kancane ukwazi ukuthi le yindawo yokucindezela.
Uma isikulufu sesikhala sesigaxa sesiqiniswe kakhulu, singadala ukuthi iposi lesihlalo liphuke futhi liqhekeke. Uma uyilungisa futhi uyikhipha, ungabona ukuthi kulungile. Yenza umsebenzi wakho wesikole, hlola ukuthi uthola ini bese uzama ukuthola ukuthi kwakuyini i-spec yokuqala yebhayisikili.
Kumabhayisikili enziwe eminyakeni emihlanu edlule, lokhu kulula ukukwenza nge-inthanethi. Lokhu akudingeki ngokuqinile, kepha kungakwenzela impilo yebhayisikili lakho uma wenza kusebenze imodi yeSherlock Holmes. Kuzokusiza futhi ukunquma inani lebhayisikili, isb.
B. ngabe izingxenye zithuthukisiwe yini. Isibonelo, uma isenamathayi okuqala futhi ineminyaka embalwa ubudala, kungenzeka ukuthi ayiqhutshwanga kakhulu.
Amathayi aguqulwa kaningi futhi amabhayisikili avame ukuza namathayi ashibhile imfoloko ehlukile kunaleyo eyafika nayo ekuqaleni, kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi eyokuqala ilahlekelwe ngokuphelele engozini, uhlobo oluthile lwefulegi elibomvu elingaba khona. Ngakho-ke kufana namaphaneli omzimba angahambisani kahle emotweni, into okufanele uyiqaphele, kepha-ke, uma ibhayisikili linamasondo ahlukene nesali, lezi izingxenye ezivame kakhulu zebhayisikili ukuvuselelwa ngakho-ke zingaba ngcono kunalezo ezine Ibhayisikili elithunyelwa ekuqaleni lalinomonakalo wezimonyo kufreyimu, kepha linikeza umbono wokuthi ligibele ibhayisikili kangaki. Ngaphezu kwalokho, abanikazi abaqaphile bathambekele ekubekeni amaphedi nezimagqabhagqabha kufreyimu ukuvimbela lolu hlobo lomonakalo.
Ngokuqondene nezintambo uqobo, umthetho ojwayelekile wesithupha uthi abagibeli bamabhayisikili abagibela njalo bayazishintsha njalo eminyakeni embalwa. Ngakho-ke kufanele ubheke kumthengisi ukuthi izintambo zagcina nini ukushintshwa noma zashintshwa ukuze ube nombono wokuthi ungadinga nini ukwenza lokhu ngokuzayo. Uma ubopha amabhuleki, amabhuleki ayaguga, kanjalo nogwali wesondo.
Bamba manje kuvame ukuhlala unomphela futhi kuhlala isikhathi eside ngokuhlanzwa okujwayelekile, kepha kuyaphela ngokuhamba kwesikhathi. Futhi okwenzayo angifuni umgqomo we-concave, nansi insimbi esesiphethweni manje, noma okokusebenza kuziphonse kude kakhulu manje njengoba sekuyi-concave. Ungayibona ngokuyibuka futhi nangokuyizwa ngomunwe.
Uma ziyi-concave cabanga ngalokhu ngoba kusho ukuthi uzodinga ukuthenga isondo elisha futhi uzobiza izindleko. Okufanayo kuya kuma-disc brakes, kepha umehluko lapha ukuthi kuphela ukujikeleza kwe-disc brake okuphela bese kungadinga ukuthi kufakwe okunye lapho kuguga, okushibhile kakhulu kunokufaka isondo lonke, kufanele futhi ubheke amathayi Abanye abagugile kulindelekile, kepha bheka ukuthi unyathela selugugile yini futhi ubheke noma yikuphi ukusikeka okukhulu nezimbobo esondweni ngoba lokhu kungasho ukuthi bazodinga ukufakwa okunye ngingakusebenzisa lokhu ukwenza ezinye imali yokuxoxisana kabusha ngentengo yohlu lwebhayisikili. Kuyefana nasethepheni lesibambo.
Uma isigqokile futhi ingcolile, yisebenzise njengethuluzi lokuxoxisana ngemali ethile sizobheka i-powertrain. I-drivetrain ibhekisa kumaketanga, iketanga, nekhasethi ebhayisekilini. Manje lezi zingxenye zizoguga ngokuhamba kwesikhathi futhi ungalindela ukuthi zishintshwe njalo.
Indlela enhle yokuhlola iketanga ukubona ukuthi KULUNGILE yini ukusebenzisa i-chain tester elula. Ungazithenga ezitolo zamabhayisikili ngamakhilogremu ambalwa futhi zingukutshalwa kwemali okufanelekile. Isihloli se-chain sikutshela ukuthi ngabe iketanga seliluliwe yini, futhi kulula kakhulu ukulisebenzisa, umane ulifake bese likutshela kanjalo.
Iketanga lika-Opie lihamba kahle. Uma i-drivetrain igugile, ingahle yeqe kancane bese igxuma iketanga ekhasethini, okuvame ukubonakala uma ukhipha i-torque encane. Isibonelo, lapho uphuma esihlalweni.
Kodwa-ke, akusikho ukuphela komhlaba njengoba ngishilo, lezi zingxenye zingashintshwa, kuyinto nje efakwe ezindlekweni eziphelele. Esinye isibonakaliso sokugqoka kwe-drivetrain ngamazinyo ajikekile noma angalingani ekhasethini noma emaketangeni. Enye indawo okufanele uyihlole yindawo yobakaki engezansi lapha, lapho izingalo ezi-crank zikuhlaka.
Lokhu kubaluleke kakhulu ngamabhayisikili e-carbon fiber futhi kufanele ubheke imifantu noma umonakalo. Ungesabi ukucosha ibhayisikili ubheke ngaphansi kwalo. Futhi hlola i-drive side chainstay, imvamisa kuba nokulimala kwezimonyo kuphela, kepha kufanele ukubukwa.
Uma iketanga liwa noma liwa phansi, ifreyimu ingasuka lapho futhi iketanga kwesinye isikhathi lingashayisana nalesi sikhonkwane sochungechunge y uma ushayela endaweni engalingani. Futhi lokhu kungaholela kuma-chips nokuklwebheka kozimele, imvamisa kuyisimonyo kuphela kepha kufanele ukubukwa futhi uhlole ukuthi amafreyimu awabhujiswa ngokuphelele Ungabona ama-bearings ukubona ukuthi kukhona yini ukudlala kuwo. Uma kukhona ukudlala kumabhere, kusho ukuthi imvamisa kudingeka ukuthi ithathelwe indawo.
Amahedisethi athwala kuqala, ngakho-ke indlela ovivinya ngayo lokhu, faka ibhuleki langaphambili, uyibeke phezu kwebhayisikili njengoba ngenza manje, bese uyinyakazisa ngapha nangapha. Manje, uma kukhona ukudlala, uzozwa ukuthi kuhamba ngokumelene neshubhu ehambayo, lapha ngokumelene nohlaka, futhi uyakwazi ukukubona. Ngenhlanhla awukho umdlalo kulokhu.
Ukubona ukuthi kukhona yini ukudlala kubakaki ongezansi, okuyi-eksisi yebhayisikili, beka isandla sakho engalweni eyisijeziso bese uzama ukusisondeza lapho. Futhi uma kukhona umdlalo, ngenhlanhla uzophinde uzizwe ungekho umdlalo kulokhu. Futhi ekugcineni, bheka ukuthi kukhona yini ukudlala kumabhere wheel, indlela yokwenza lokhu ukubamba isondo, ngaphambili nangemuva, bese uzama ukulidonsa ukusuka kolunye uhlangothi.
Futhi uma kunokunyakaza okuningi emaceleni lapho isondo lihamba kanjalo, khona-ke kukhona ukudlala ekamu okungadingeka Manje uma uvula imodi uSherlock Holmes masinyane, futhi ubheke umuntu ogibele ibhayisikili Uma amabhere edlala , lapho-ke kungenzeka ukuthi abanakanga kangako futhi mhlawumbe abazi ukuthi benzani. Ulwazi oluyisisekelo. Kufanele uhlale ubheka ukuthi amasondo alungile yini futhi ngeqiniso sisho ukuthi siqondile.
Lapho ibhayisikili lishayisa noma lilinywa emgodini omkhulu kungadala ukuthi amasondo axege futhi ungakubheka lokhu ngokumane uguqule isondo futhi ubuke uphawu lwe-skid lunyakaza maqondana nephedi yamabhuleki bese ubona ukuthambeka kwesondo uma kuhamba thanda lokhu. Uma isondo linokuthile okungahambi kahle, akusikho ukuphela komhlaba, kuyinto engatholakala kalula esitolo sakho samabhayisikili sangakini cishe ngo- £ 10 noma yini njalo imali yakhona, engalungiswa. Yize kuyinto okufanele uyicabangele ekufakeni kuhlu intengo, usebenzisa ibhayisikili njengethuluzi lokuxoxisana.
I-Same iya ngamabhuleki ediski, lapho ujikisa isondo ukubola kwediski akumele kugudle umuntu oshayayo futhi uma kwenzeka kungakhombisa ukuthi idiski empeleni ligobile kancane futhi liyazamazama, futhi, into engeyona eyeMali ingalungiswa , kodwa yicabangele. Uma i-disc isontekile kancane, uzoyizwa (yenza umsindo okitikayo) njalo lapho idlula iphedi. Ungakwenza kanjani lokho? Uyasho ukuthi ibhayisikili libe nengozi? Ngizokutshela ngezimpawu zokulimala ngengozi.
Manje kungahle kube sobala uma ibhayisikili liphahlazeka uma liyizicucu eziyisigidi, kepha ngizokhuluma ngezinto ezicashile kakhulu. Okokuqala, imeshi yangemuva, lokhu kuyinto yakudala, uma uthola ukuklwebheka okukhulu kumeshi ongemuva lapha, kahle. uphawu oluhle lokuphahlazeka.
Hhayi-ke, amabhayisikili ayisinkwa esincane nebhotela, ajwayele ukwehlisa uhlangothi lwebhizinisi phansi, kuyaxaka! Kepha qiniseka ukuthi kukhona enye esihlalweni, lapha onqenqemeni lwesali, uma kukhona umhuzuko othile, futhi ongaba uphawu oluhle lokuthi amabhayisikili asehlile. Futhi nakwizigaxa zegiya lapha nasetheyipini lesibambo, uma itheyibha yesibambo idabukile onqenqemeni futhi isigwedlo segiya sinemihuzuko, kuphakamisa ukuthi ibhayisikili libe nomthelela. Gqoka futhi udabule iziphazamisi zamagiya, isihlalo sehhashi, ngisho nezikebhe ezinkulu zangemuva imvamisa kuyizimonyo nje kuphela.
Ngakho-ke uma uhlunga emaphaseji futhi akukho ukweqa noma ukweqa futhi yonke into isebenza kahle, lokhu akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo, ngaphandle kokuthi ungabukeki kancane, ukhathazeka kakhulu ngohlaka. Ngakho-ke into yakudala yi-top tube bump, manje ebangelwe yingozi, ukuthi izibambo zizungeza ngokushesha bese zishaya ithubhu ephezulu. Manje ongakwenza empeleni ukushintshanisa izinduku ukuze zenze i-tu ephezulu.
Bese ubheka lelo phuzu elithile kushubhu ephezulu bese ubona ukuthi akukho monakalo lapho. Uma kunjalo, lokhu kungaba yisizathu sokukhathazeka. Enye into ejwayelekile kakhulu ngama-aluminium noma ozimele bensimbi ukuthi ngabe ifreyimu empeleni isontekile noma igobile.
Thatha itheyiphu yokukala noma uma ungenayo ithephu yokukala ungasebenzisa intambo futhi okufunayo ukukala ukusuka kokuyeka phansi ngemuva kuye kuthubhu ephezulu endaweni efanayo ohlangothini ngalunye lwebhayisikili, amabanga womabili kufanele okufanayo, uma kungenjalo kungakhombisa ukuthi ifreyimu isontekile noma isontekile, futhi uma kwenzeka kungcono ukusuka nje, zama ukuthatha ibhayisikili ukugibela isikhashana. phansi nje komgwaqo kufanele kwanele. Phuma esihlalweni ungqangqelanise nezinyawo, ulalele imisindo edlikizayo, ikakhulukazi kubakaki abaphansi.
Kungasho ukuthi obakaki abangaphansi badinga ukushintshwa, hlola nokusebenza kwamabhuleki futhi, kufanele bazizwe benethemba futhi bakwazi ukukhiya amasondo. Munca futhi amagiya bese ubona ukuthi ungangena yini kuwo wonke amaphini futhi akukho okuchofoza noma ukweqa. Sekukonke, uma ukunikezwa kubonakala kukuhle kakhulu ukuthi kungaba yiqiniso, kungenzeka kunjalo.
Futhi lapho ibhayisikili linezinkinga eziningi, kungaba nezinkinga ezingaphezu kokufanele. Imakethe yamabhayisikili esetshenzisiwe inempilo, imakethe yomthengi, futhi kunamadili amaningi ongawathola. Ngakho-ke ungesabi ukubukeka kakhulu njengoCraig David ..
Futhi uhambe. Kepha kulwazi lwami lokuthenga amabhayisikili asetshenzisiwe, uma ibhayisikili linakho lokhu? Izinto ezimbalwa, njengezinye zezinto esikhulume ngazo ku-athikili, kungaba ama-ammo amahle ukwehlisa intengo. Ngakho-ke, haggle.
Kulungile, ngithemba ukuthi uthole le ndatshana ilusizo futhi ifundisa. Futhi sicela wabelane ngayo nabangani bakho, ikakhulukazi uma befuna ukuthenga ibhayisikili futhi bengenalo ulwazi oluningi. Nginesiqiniseko sokuthi uzokuthola kuwusizo.
Futhi uma ufuna ukubona ama-athikili amaningi ungachofoza ngezansi bese ubhalisela i-GCN futhi, kumahhala! Ngikufisela inhlanhla oseshweni lwakho, kunamadili amahle amaningi laphaya, konke okuhle ngokuthola ibhayisikili elisha, ngizohamba manje, hamba!
Yimaphi amabhayisikili amahle kakhulu?
5 weI-Vintage ehamba phambiliIbhayisikili Brands
5 weI-Vintage ehamba phambiliIbhayisikili Brands.Ukuvunaamabhayisikili yimishini enhle, eyenziwe ngezandla neyomuntu uqobo engatshela izindaba ezithokozisa kakhulu.
Silapha eBerlin futhi sizokukhombisa isitolo sebhayisikili esipholile kunayo yonke unesitolo sebhayisikili shop cafe vintage noma ungavele ubabonise, jad lesi sitolo sebhayisikili esiyingqayizivele sigcwele ikhofi lebhayisikili elihle nezinsiza, kepha ngaphambi kwethu ngena emininingwaneni ake sifunde kabanzi ngayo u-Andreyes die Windage Bikes aqale eBerlin njengesitolo samabhayisikili esiku-inthanethi ikakhulukazi e-Windage racing amabhayisikili futhi ekuqaleni wayenesitolo esihle kakhulu se-humber esasinabantu abambalwa ababesebenza lapho, sasinendawo yokusebenzela encane futhi yaba nkudlwana futhi yaphumelela ngokwengeziwe, ngakho-ke sangeniswa egumbini elihlukile futhi sanquma ukuvula ikhefi elincane ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi ikhofi namabhayisikili ahambisana kahle futhi ngemuva kwalokho siphumelele kakhulu kangangokuba bekufanele siqashe okuningi amakamelo amakhulu nakwesinye isifunda saseBerlin ahamba amamitha futhi njengoba ubona ukuthi sekugcwele, manje sesivule nesitolo sesibili eBerlin ukuhlangabezana nezidingo, njengoba siphuma emuva futhi lapho sibhekana ngqo khona izinhlobo ezikhethekile zamabhayisikili nabantu abanesifiso sendawo ethile yokuhamba ngebhayisikili manje sesijoyina umphakathi obanzi futhi sifuna abantu abaningi ukuthi bangabi nentshisekelo kumabhayisikili wevintage kuphela, kepha nakwimishini yesimanje yokuhamba ngebhayisikili Ukuhamba ngebhayisikili ngokujwayelekile manje unebanga imfashini yamabhayisikili ehlukile lapha une-retro unemibala unamakhasethi amaningi Hei ubone ingubo yami Sithumele amabhayisikili emhlabeni wonke, ngakho-ke ukusuka e-Alaska kuya eTasmania sinesihlabathi, khona-ke amabhayisikili amaningi athengiswa wonke phezu kweYurophu, kepha mhlawumbe ngama-50% aya phesheya kwezilwandle, lokho kuyisifaca kusukela ngeminyaka yama-1990s ekubukekeni kwesibonelo seSpider- Speed, ukumiswa empeleni kubukeka kunethezekile futhi kubuye kube m okuncane okushayela imoto, kwenziwa ngamashubhu angaphakathi nesibambo amateyipu ngakho-ke usuyibonile ikhefi futhi usibonile nesitolo, manje ake sibheke ngemuva kwezigcawu kanye nasendaweni yokucobelelana ngolwazi okungayi kuyo abantu abaningi, ngilandele lezi ezifihliwe Ingxenye yesitolo samabhayisikili iyindawo lapho okwangempela kugcinwa amaqhawe.Amabhayisikili akhona abalethwe esitolo bahlolelwa ubuqiniso futhi babuyiselwa enkathini yabo ngezingxenye zebhayisikili ezifanele ukuqinisekisa ukuthi bangakhweliswa njengokusha ikakhulukazi le workshop ingabonakali ukuthi kufanele isebenze emabhayisikili wevintage, banakho konke abakudingayo ukuze bakubuyise futhi bakulungise amabhayisikili, lapha ungabona wonke amasethi weqembu nezinsimbi ezindongeni lokhu kunguhlaka lukaFrancesco moser futhi empeleni luhlobo olufanayo lohlaka olufana nalokho akwephula emzameni wokuqopha umlando eMexico City ngo-1984 futhi wawuthandwa kakhulu ie
Njengoba befaka ibhayisikili ekukhiqizeni futhi ngiyabona ukuthi kungani iduku elibukeka libukeka kahle kakhulu, yebo, ngazithola sengixubene namabhayisikili ama-vintage angama-200. Banamabhayisikili asuka kuma-3060s 70s 80s ngiwutholile lapha ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngikubonise ezinye zazo ezikhethekile, kulungile, ukuthi yini ongayikhetha, ibhayisikili le-TT, ibhayisikili elifanayo abantu baseRussia ababelisebenzisa kuma-Olimpiki aseMoscow. Okuthakazelisayo ngaleli bhayisikili yipayipi, mncane ngokumangazayo, awubanzi kakhulu kuneMythumb.
Faka namabhuleki ngemuva kwamaxoxo angaphambili ukuze ube namabhuleki akhelwe ngaphakathi, ngomqondo ongokomfanekiso. Ibhayisikili elihle kufanele ngithi futhi linokufakwa kwesihlalo okugcinwe kukho konke kulabo abazuza i-aero oh ibhayisikili elibukeka lipholile elinye ibhayisikili engilitholile nansi ibhayisikili le-cinelli track kusukela ngawo-1960 lesi isibonelo esihle sokulungiswa abakwenze lapha, iphindwe yafakwa i-chrome, yapendwa futhi unesihlalo se-chin sangempela, isikhumba sakho sisesimweni esihle. Uma ungibuza, lokhu kufanele umnyuziyamu, uphelele impela, leli yikhoneni lika-35 Ferrari - Ukubona ukuphakama okuphezulu ibhayisikili lesikole engicabanga ukuthi ungavumelana nalo likubamba iso lakho imigqa, imibala nakho konke ngakho okwenza ibhayisikili elibukeka lipholile ngokumangalisayo iBike lahlanganiswa ngeminyaka yama-1980 eyenzelwe imikhiqizo edumile yase-Italy efana noFerrari noCampagnolo. UCampagnolo ubuye wakhetha ukuthola yonke iqoqo leLake Record elifakwe igolide elinamabhuleki e-cobalto futhi empeleni akukho zindleko ezasinda ekwakheni leli bhayisikili eliyisikhumbuzo.
Elinye ibhayisikili elingikhange kakhulu yile Teammartini ka-Eddy Merckx ngokuhlunga nge-booger eya eRosait kwakuyibhayisikili langempela ayeligibela ngo-1975 iTour de France futhi ungaqonda ukuthi kungani amasondo ensimbi evuthiwe eziqhenya kangaka ngokungeza lo mbhalo womlando ukuqoqwa, manje elinye ibhayisikili elidonse iso lami yileli Gianni Mota uqobo 2001 ARBrivet Ottogianni Mota Ukube ubungazi ukuthi wayengomunye wabagibeli bamabhayisikili abakhulu ngeminyaka yama-60s nama-70s yizinto azenza ukuqinisa njengegobolondo lobakaki elingezansi inezimpiko ezimbili ezengeziwe, iphuzu le-pivot laliklanyelwe ukuqinisa imfoloko, ama-dropout angemuva athengiswa ezinsukwini ezisele kunokuzithuthukisa Ukwenza ngcono ukuqina konke okusongwe kuhlaka lokujaha lwakudala lwalesi sikhathi iqembu lisethe Campagnolo craw turd down a widedelta brakes the wheel are superb and brozo disc wheel with Campagnolo c recordhubs bese ukuyiqaqa phezulu kwakudwetshwe ngokukhanya kwe-fluorescent ebumnyameni ngemibala yakudala yase-Italy uma ngikhuluma iqiniso iningi lomsebenzi wami kulapho ngingakwazi khona ukululeka isandla ngamabhayisikili ngoba lowo ngumsebenzi okunikeza okuthile emuva uma usebenza kuwo futhi ekugcineni lapho uya kusihlwa ucishe amalambu ongawathatha ukubukwa kokugcina kwebhayisikili oqeda nje ukulisebenzisa kahle oh lokho bekuyisibhamu esihle manje, bekumangalisa ukuvakashela amabhayisikili ensimbi evuthiwe lapha eBerlin, uma uke waba kule ndawo uyihlole, ngeke badumele yebo banekhofi elihle impela ukubhala okuhle noma ukuhlala kulo - yebo, ngazitholela isikhumbuzo esincane, kungani kulungile? Ngicabanga ukuthi amabhayisikili alandelayo
Liyini ibhayisikili le-retro?
I-Retrokungaba yiibhayisikililokho empeleni kukusha kepha kunesitayela ngendlela yakudala.Novemba 17, 2011
Kumele aye kuphi? Damn it, Matt, weza ngani? - Sawubona, Si. Kungumhlonipho omncane nje owedlule, umlingani ngempela. Ngabe uyakwazi okubonayo? - Nginombono omuhle ngalokhu engikubonayo, kodwa mhlawumbe udinga ukungikhanyisela. - Lesi ngesinye sezithuthuthu uStephen Roche agibele eGiro, Tour de France nakuWorld Championship eya eTreble, Si in Ngo-1987, futhi lesi ngesinye sezithuthuthu ayehamba ngazo uStephen. - Kuhle lokho - Kuyingxenye yomlando wamabhayisikili futhi wena, ndodana yami, usuzothatha ithanga.
Ungahlala ngebhayisikili lami uma ufuna - lokho kupholile impela, akunjalo? IMISEBENZI YAMANZI
Ngisho amathayi asekuqaleni eVittoria kusuka ngo-1987 kuwo. Ababambeki nomoya, kepha bagingqika kahle. Futhi ikhithi ephelele ye-retro.
Nginezicathulo zokuqala zakwaSidi ezenziwe ngesikhumba esigcwele kusuka ngo-1986 - Nice.- isigqoko sokuzivikela saseDenmark esivela ngo-1988 kanti futhi nejezi likaCarrera kusuka ngo-1987, okusobala ukuthi uStephen walunqoba lolu hambo.
Kungithathe nje imizuzu engu-15 ukuthola unyawo lwami kuzikliphi zezinzwane ukuba ngithembeke ngokuphelele. Kepha ngizokutshela ukuthi uthini, kuthiwani ngokufuna i-spin masikwenze ukuze ngi
Engizokwenza, ngizobeka uhhavini emlilweni ophakathi bese ngilibhaka ikhekhe leRetro kuze kube nsundu ngegolide. ♪ Bheka eceleni - Uyabona, kunzima impela, akunjalo? Uphi umgodi? Angiwutholi umgodi wakho, Math. Matt 'Ngakho-ke Matt, akukubi kakhulu? - Kulungile. - O, kuhle. - Matt, kunezinto eziningi kakhulu ezihlukile ngaleli bhayisikili, kungaba ezicashile noma ezinkulu, angazi ukuthi ngizoqala kuphi Uyini umbono wakho wokuqala? - Ngicabanga ukuthi ngokushesha ukulanda ibhayisikili.
Inzima ngokumangazayo, futhi uma uyiqhathanisa neRidley oyigibelayo, ngokwesibonelo, ngicabanga ukuthi okungenani sibili, ezimbili nohhafu, mhlawumbe amakhilogremu amathathu anesisindo kunebhayisikili elijwayelekile, elingasindi lomjaho namuhla. Kepha into yokuqala oyibona ngokubukeka ukuthi amapayipi anciphe kanjani. Leli bhayisikili liyishubhu leColumbus XLS.
Kubukeka buhle. Kunobuciko obuningi kakhulu emhubheni. IBattaglin igxivizwe yonke indawo.
Muhle impela, kepha ubukeka ubuthaka nje. Kepha uma kukhulunywa ngokugibela, akukhona ukuthi ngigibele
Angigibelanga leli bhayisikili, kodwa ngangihamba ngozimele bensimbi lapho ngiqala futhi uyakhohlwa ukuthi aqinile. Ngicabanga ukuthi uma ubheka ibhayisikili elinjengaleli uma uliqhathanisa namabhayisikili anamuhla, avele abukeke eqinile futhi lawa abukeka ebuthaka nje.
Kepha uma uphoqelela amandla akukho ukulahleka okukhulu kakhulu, akukubi kangako. Into eyodwa nje emnandi ngaphambi kokuthi ngishaye amaphedali, sengiphelelwe amagiya manje. Ngicabanga ukuthi ngiku-42/19.
Kungamagiya ayi-7 ngakho-ke yikho kuphela enginakho - unawo amashubhu phansi kuwo - yup - ishifti enkulu kunazo zonke ekushintsheni ngaphandle kokwakhiwa kwesiphepho kwaba lapho uShimano ehambisa amashifu waya ezigungwini. - Ngakwesokudla. ubuyele kubhubhu phansi? - Kuyaxaka.
Ngiqonde ukuthi, kokunye, ngithanda ukubabiza ngalokhu bayazisoka.
Futhi ngalokho ngiqonde ukuthi, kufanele uzisike ngokwakho. Lokhu akubhalisiwe ngisho. Ngisho nenani elifanele le-torque, ukushintshela eringini elikhulu akunzima kakhulu.
Ngiqonde ukuthi leli bhayisikili selicishe libe neminyaka engama-30 ubudala futhi langena ngokushesha. Ngempela, kuhle impela. Enye into evelele, imfucumfucu yokubamba isihlalo-esikhwameni, awukho okuningi.
Ngizizwa ngimuhle kakhulu ngaphambili. Uma ubheka isikhundla uStephen Roche abuyele kuso ohambweni, bekungekho ngokweqile njengabashayeli banamuhla, futhi kuzwakala sengathi ungavakashela ngokujabula usuku lonke ngaphandle kokuyekethisa. Yebo, noma iyiphi induduzo, impela.
Nansi into. Uma uphelelwe yigiya, hlala phansi, ukhethe futhi, bese uyahamba. Nginesiqiniseko sokuthi akuthathi iso ukubona ukuthi empeleni ngisebenzisa isigaba esijulile sanamuhla ngaphambili kuleli bhayisikili.
Ngeshwa la mathayi aneminyaka engama-30 ubudala kwathi elilodwa lahamba ngaphambi nje kokuba sihambe. Futhi sisalelwe cishe yizigidi ezimbili khona manje, ngicabanga ukuthi uSimon. - Ake ngikutshele, Matt, sengibambe ongezansi manje, bona ukuthi le nto iwa kanjani.
Unamabhuleki e-delta angadumile ngokuba muhle ngokukhethekile - abe nokushintshashintsha kwezwi okwakhelwe ngaphakathi, okungalungile impela - cha - ake sithathe enkulu, asihambe. Amabhuleki empeleni angibhekele phansi futhi, futhi ngisebenzisa amaVittoria CXs acishe abe neminyaka engama-30 ubudala ngakho-ke ngizoqapha kancane. Kepha empeleni kuzizwa kulungile.
Indawo enhle yomgwaqo futhi imunca indawo engalingani futhi empeleni intofontofo. Masihambe, i-retro uma kuqhathaniswa nezanamuhla, ukunqoba kwe-retro. Halala, Si! - Hayi suka.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngokudluliswa isilinganiso segiya, lapho nochwepheshe sebeshayela izingqinamba. Ukuyiphi, 42/20? - Yebo, iringi enkulu ingu-52, indandatho encane ingu-42. - Senza isivivinyo esincane nje - Kulungile - ngoba bengizibuza ukuthi singakwazi yini ukusunduza imingcele yokuthola leli bhayisikili. - Khumbula futhi , Si, nginezicathulo ezinezinyawo zesikhumba ezigcwele.
Ngakho-ke ngilahlekelwa okungenani ama-watts angama-80 ngenguquko ngayinye, ngicabanga - ekukhuphukeni okunamandla njengale, lapho nesisindo sibalulekile, akunjalo? - Yebo, futhi nginezinto ezimbili nohhafu, amakhilo amathathu ngaphezu kwakho. O, imvuthu. Leli gquma liqine kakhulu, iSi. - Empeleni, liya ngokuya liba libi kakhulu ekhoneni. Kwehle kangakanani lokho, cishe eyodwa kwezine? - Yebo, kunjalo.
Ngicabanga ngayo yonke ingxenye yesithathu ekhoneni. Angiphoxekile kakhulu manje, Si.
Sizozama kancane? - Enye into leli bhayisekili elimaka ngayo ushintsho lwenkathi yizinyawo, akunjalo? Usagqoke iziqeshana nemichilo, njengoba wazi, uStephen Roche wawina i-Euro Tour, Worlds, Triple Crown. - Ngokuya ngokusebenza kwangempela, ngicabanga ukuthi ziyefana ncamashi, kumane nje kuyindaba yokusebenziseka kalula futhi kuyindaba elula. Uma usuphethe unyawo lwakho ngokuqinile, awulahlekelwanga yilutho, futhi khumbula ukuthi ngasekupheleni kweminyaka yama-1980, uSeanKelly wawina ama-classics amaningi ebhekene nabagibeli abambalwa ngaphandle kweziqeshana.
Kungenye nje yalezo zinto. Ngokuqinisekile awalimazi amandla. - Nangu umbuzo ovuthayo, Math.
Njengoba kunikezwe intuthuko enkulu kwezobuchwepheshe phakathi kuka-1987 nebhayisikili lika-2014, ingabe kumnandi ngokwedlulele futhi kukhululekile ukugibela ibhayisikili lesimanjemanje noma elidala? - Uyazi yini? Bengishayela lokhu amamayela ambalwa manje, kuzwakala kukhululeke ngokuphawulekayo. Ngama-tweaks ambalwa ngingahle ngiphakamise ama-hood kancane, empeleni kuyintokozo ukugibela. Kuyingxenye yamagugu okuhamba ngebhayisikili futhi uyazi ukuthi empeleni ngicabanga ukuzithengela ibhayisikili le-retro ukuze nje ngigijime emathilomu futhi ngijabulele nje ukuthi kuyini ukuhamba ngebhayisikili.
Ngicabanga ngokusebenza okuphelele noma uhambo olunzima, olunzima lokuqeqesha, ngiya kwelinye lalawo. Kepha izinsuku ezikhululekile elangeni, bengizokhetha eyodwa yalezi ukuze nje uthokozele lo mdlalo. Ake sikuphakamise lokhu kancane sibone ukuthi lobuhle bungakwenzani.
Yini esinayo ewashini? - Twenty - Five - Twenty - seven, 28, 29, 30 mph. Bheka! Usubuyile Si? Ukuthola ezinye izici ze-GCN ngoLwesihlanu chofoza lapha bese uchofoza i-retro tech yami lapha futhi ukuze ube ngumlandeli we-GCN, chofoza isigqoko sami.
Yini eyenza ibhayisikili libe yinto yakudala?
Kubhekwa izithuthuthu ezingaphezulu kweminyaka engama-20 futhi ezisesimweni esiseduze kwasekuqaleniemabhayisikili zakudala. Ukuqinisekisa iukuvunanoma i-antiqueisithuthuthukuyefana nokuthenga inqubomgomo yanoma iyiphi enyeibhayisikilimaqondana nezinhlobo zokubika ezitholakalayo.Febhuwari 16, 2021
Ubuchwepheshe bebhayisikili buhamba ngokushesha okukhulu. Njalo ngonyaka imikhiqizo emisha ingena emakethe elula, eqinile futhi enamandla kakhulu. Konke okuthiwa kusenza sisheshe.
Kepha umehluko kangakanani owenzayo empeleni? Ashesha kangakanani amabhayisikili anamuhla? Ngifuna ngempela ukuthola - nami - ibhayisikili elihle.- O, ngiyabonga kakhulu.
Uyawuthanda umjaho? - Yebo, kulungile. Phezulu nangemuva? - Kulungile - Kuzwakala kukuhle - Kulungile. Yithuba lakho, i-retro I. ♪ ♪ - Leli bhayisikili liyisiqeshana sangempela somlando.
Yi-Orbea ebigijinyelwe ukunqoba ngo-1985 iVuelta i-Espana nguPedro Delgado. Leli ibhayisikili lakhe langempela, futhi yinhle. Uhlaka lwensimbi, amashubhu ka-Vitus 788, anamagiya ayi-12 kuphela, anikezwe yi-Simplex, amarimu we-Weinmann, amabhuleki akwa-Weinmann, amathayi eMicrosoft, empeleni abanzi kakhulu kuma-25 ° C.
Ukuphela kwento engekho yizicucu zezinzwane nemichilo. Yini engimelene nayo lapho? Liyini ibhayisikili lesimanje? - Ngicabanga ukuthi ungasho ukuthi lo ngumzukulu omkhulu kaPedro Delgados Vuelta, isithuthuthu esiwina i-Espana. Yi-Orbea Orca M-LTD, futhi kule minyaka engama-31 edlule bekukuhlobo oluthile lokudla futhi kwehle amakhilogremu athile asindayo.
Manje akekho owayezungeze ngethoshi lokushisela. Esikhundleni samashubhu wensimbi ayisishiyagalolunye, sinezingcezu eziyi-130 ezisikwe nge-laser ze-carbon fiber ezibekwayo, ezinamathelisiwe bese zibhakwa ndawonye. Siphinde sibe namasondo ekhabhoni, izihlalo zokuhlala, izibambo neziqu, kulokhu amagiya angama-22, iShimano's Di2, nayo ilawulwa ngobuchwepheshe bekhompyutha, futhi ngijabule kakhulu ukuthi nami nginezinyawo ezingena-clip lapha.
Ngakho-ke uyini umjaho wethu? Phezulu kwalelo gquma kukhona amamitha angama-280 ukuphakama. Sinamakhilomitha amane emigwaqo emihle, emazombezombe phakathi kwalapha nalaphaya, futhi ngizogijimisa futhi ngibuyele emuva futhi. Mane ulinganise umehluko.
Awekho amamitha kagesi, asinabaqaphi bezinga lokushaya kwenhliziyo, siba yisidala, ngokuzizwa. Lishesha kangakanani leli bhayisikili? - Qalisa inombolo eyodwa. Ake sibheke ukuthi ngingenza ubulungiswa yini ngesithuthuthu esiwina iGrand Tour.
Manje njengoba siku-2016, ukuphepha kuza kuqala, kunjalo. Angiqiniseki ngokuphelele ukuthi uMnu. Delgado uzocabangani ngokukhetha kwami ​​izicathulo nokungabi bikho kweziqeshana zezinzwane, kodwa ake sizame noma kunjalo.
I-Down tube shifter, kufanele ngiyijwayele lapho amehlo akho okhozi phakathi kwenu ngokungangabazeki azobona ukuthi angisalisebenzisi isondo langemuva likaPedro Delgado. Singaba nenkinga, Mike. Cha, ngicabanga ukuthi sinenkinga yangempela.
Futhi angazi noma kungenxa yokuthi nginamandla amakhulu kunaye, angicabangi kanjalo, kodwa ngeshwa ngiphule isondo lakhe lezimoto ukuze ngibe nebhayisikili eliphelele le-retro ngaphandle kwesondo langemuva. Ngitshele ukuthi iketanga elingu-6-V ligudluke kahle kunini ku-11-speed block. ♪ - Run inombolo yesibili kuseduze.
I-Strava ivuliwe, ibhayisikili lesimanje selilungele ukuhamba, asikwenze. First Into yokuqala oyiphawulayo ukuthi angakanani amabhayisikili aqinile manje. Angazi noma ukuqina kuyashesha yini.
Izwa ngokushesha. Ukushintsha amagiya nakho kufanele konge isikhathi. ♪ - Angikaze ngigibele ibhayisikili elinama-levers shift levers ngaphambili.
Ngakho-ke kufanele kuthiwe ukuthi awulahli isikhathi esiningi udlala ngebhubhu lakho eliphansi, kepha ukuthola igiya elilungile kuyindlela yobuciko. Yize empeleni bengikwazi ukusebenzisa isondo langemuva elifanele. Ngibona umqansa umqansa uqhamuka ngakho kufanele ngishintshe amagiya.
Ngicishe ngingenalutho yize nginezinqola zangemuva eziyi-11. Eduze kwaphezulu. Ngiyaqala ukwesaba ngokwehla.
Kukhona umugqa. Ngiba novalo ngokushintshela eringini elikhulu. Kwenziwe
Ngiphakathi! O ndoda, lokho kwakulula kunalokho engangikucabanga. ♪ - Kumele ngithi, angazi noma kungenxa yokuthi ibhayisikili likaPedro alizange nje lingilingane kahle ngenkathi leli lingilingana negilavu, kodwa nginesikhala esiningi lapha. I-geometry yesimanje isisenze saba phansi kancane, ngakho-ke ngithola ubunzima engizama kubo, lapho ngithola okuphansi.
Kufana ne-aero-groveling noma okuthile. Nansi ithiphu. Kukhona umugqa wokuqeda.
Isikhathi sekhefu. Ilungile. Ukwehla.
Venga, venga! ”“ Kulungile. Sizomisa iwashi. Lokho kwakukuhle kakhulu.
Ngakho-ke silapha. Okokuqala, ngifuna ukusho ukuthi lolu bekuwusuku oluhle kakhulu. Okwesibili, ngicabanga ukuthi asikwazi ukubalekela imiphumela ebandayo ebandayo.
Ngakho-ke, asihambe. Manje, ngebhayisikili lesimanje, ngenze iluphu yami encane engu-5.7 km ngemizuzu eyi-12 namasekhondi angama-52.
Bese kuthi, ngebhayisikili likaPedro Delgado, ngikwenze ngemizuzu engaphezu kwengu-14 nje kuphela. Yebo, njengomuntu osanda kushiwo ngomusa eStrava, leli mhlawumbe ibhayisikili elihamba kancane kunawo wonke ake abakhona. Kepha ngifuna ukusho ukuthi ngicabanga ukuthi okokuqala emlandweni we-GCN ngizomemezela ukuthi lesi sivivinyo asifanele.
Kunjalo, i-GCN ayenzanga isayensi ngoba bengingenazo iziqeshana zezintambo nezintambo kuphela, ngiphinde ngantshontsha ibhayisikili e-Orbea's Museum namhlanje ekuseni, ngakho-ke kungenzeka kungabi njengoba uPedroDelgado egibele eVuelta. Kodwa-ke bekuyinjabulo ephelele nosuku oluthakazelisayo, ngoba la mabhayisikili afana nemini nobusuku. Yebo, inzima, akusiyo leyo eqinile futhi inamagiya ayi-12 kuphela.
Kepha iqiniso elilula ukuthi i-geometry yamabhayisikili e-retro ihluke ngokuphelele emabhayisikili anamuhla, ngakho-ke izwakala ihluke ngokuphelele. Wehla kanjani umqansa, ukhuphuka umqansa, wehla kanjani esihlalweni. Yebo, ngicabanga ukuthi kufanele sizame ukuphendula umbuzo wethu wokuqala.
Ashesha kangakanani amabhayisikili anamuhla? Ake sithi silondoloze amakhilogremu amane ngokuthambekela okungama-8%, amakhilomitha ama-3 athambile, lokho kungadinga imizuzwana eyi-15 kuye kwengama-20. Ngaphezulu kwalokho, kune-aerodynamic ethe xaxa, noma ikhuphuka, lokho kungabiza cishe imizuzwana emihlanu kuya kweyishumi. Bese ekwehleni, amabhuleki angcono kakhulu, ngakho-ke ngingahamba ngokukhulu ukushesha.
Ngakho iqiniso ukuthi ubuchwepheshe buqhubekele phambili futhi amabhayisikili esimanje ashesha kakhulu. Manje, uma uzongixolela, ngithanda ukuchitha isikhashana kukho. O, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa, ngiyabonga
Yebo. Ngeke ngikudumaze, manje uma ufuna ukuhlola ezinye izindatshana ze-GCN, futhi uma uvele uchofoze lapho, sinohlu lokudlalwayo lwe-GCN Isayensi lapho siphendula khona eminye yemibuzo evuthayo mayelana nokuhamba ngebhayisikili namandla okuhamba ngebhayisikili . Noma, uma uqhafaza phansi lapho, sinombhalo wethu wangaphambilini we-retro-versus-modern kaMatt othatha ibhayisikili likaStephen Roche ukuyosonta.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN, ungakwenza lokho ngokuchofoza phezulu lapho. Ngingasho nje ukuthi ngikhishelwe isiphuzo esiningi sewayini elibomvu izolo ebusuku futhi kuvimbela kuphela ikhono lami lokuqhafaza, okwesikhashana kuphela.
Ayini amabhayisikili amadala aseSchwinn?
UkuthengaAmabhayisikili weVintage Schwinn
Isibonelo, aukuvuna uSchwinnUmoya opholile odinga ukubuyiselwa uthengisa ngo- $ 70 okuncane. Ngakolunye uhlangothi, ama-1920sUSchwinnI-Excelsior enopende woqobo ingathengisa ngo- $ 900.
Abizwa kanjani amabhayisikili wesitayela sakudala?
I-penny-farthing, nayowaziwa ngoisondo eliphakeme, isondo eliphakeme noma elejwayelekile, bekungumshini wokuqala ukubakubizwekuya 'ibhayisikili'.
Libizwa kanjani ibhayisikili elidala?
Ingabe amabhayisikili wokuvuna athandwa kakhulu?
Amabhayisikili wevintageimpelaethandwaphakathi kwezingcweti zobuciko. Njengakho konkei-retro, ngisho leziamabhayisikiliziyakhanga ngobuhle, ziyaqamba futhi kuyabonakala ukuthi ziyabiza. Eziningi zalezi zoqoboamabhayisikilizivela esikhathini se-1960-90s ngakho-ke kunzima kakhulu ukuthola izandla zakho.Febhuwari 11, 2021
Ingabe ibhayisikili lami lingelakudala?
Izithuthuthu zibaokwakudalauma nje befika eminyakeni ethile, noma kunjaloiimihlahlandlela ethile yalokho okwenza iisithuthuthu 'classic'kuyehluka phakathi komshwalense. Abanye abashuwalense bachaza aisithuthuthu sakudalanjenganoma yimiphi iminyaka engaphezu kwengu-15 ubudala, kanti ezinye zinwebekaiizindlela zokuya eminyakeni engama-20, 30, noma ngisho engama-40.Meyi 13, 2020
Abizwa kanjani amabhayisikili amadala?
Yini eyenza ibhayisikili elijwayelekile libe ibhayisikili elijwayelekile?
'Classic' kwesinye isikhathi elinye nje igama elithi 'Used'. Sithatha ama-trade-ins futhi sinenqwaba yamabhayisikili asetshenzisiwe asezingeni eliphakeme ayathengiswa. Zonke zilungisiwe, izingxenye ezigqokiwe zishintshiwe, futhi ziza newaranti yonyaka ogcwele. Amabhayisikili ahlukahluka kakhulu kunanini ngaphambili. Bheka amabhayisikili emigwaqo angakwazi ukuhamba, ukudonsa ukudla noma ukugijimisa imigwaqo yamatshe
Ingabe kukhona isitolo esiku-inthanethi samabhayisikili avuthiwe?
Ukuvuselelwa kwe-Covid-19: Sisavulekile & amp; thumela emhlabeni wonke! Kusukela ngo-2012 i-Steel Vintage Bikes ibilokhu iyisitolo esikhulu kunazo zonke online se-vintage eyenziwe ngezandla & amp; amabhayisikili anamuhla, izingxenye nezingubo ezisezingeni. Uma useBerlin, qiniseka ukuthi uvakashela enye yezindawo zokudlela ezinhle zamabhayisikili.
Yimuphi umkhiqizo omuhle kakhulu wamabhayisikili wakudala?
IZINTO EZIMFUSHANE UJOHN CARGO IZIPHO EZIMFushane IJOHN CARGO UNISEX KOPENHAGEN CLASSIC KOPENHAGEN CLASSIC LADIES